2009 I-Ford Ranger Pickup Highlights Truck
Iimoto neekhekhi Iilori
Iimpawu kunye neenketho nge-2009 Ford Ranger Trucks
I-Ford ye-midsize pickup evela ngo-2009 ibeka umlinganiselo omangalisayo wokuba yiphakheji ebiza kakhulu. Iimpawu zezoqoqosho ezinamafutha angama-21 mpg kwidolophu kunye ne-26 mpg kwindlela ephakamileyo xa ifakwe kwisiseko se-2.3-litre ye-4-cylinder injini, iRanger eguga iyaqhubeka ibe enye yeepoto ezinamandla kakhulu ezinokuthengwa eUnited States. . Inyaniso engaziwayo e-US kukuba iFoe Ford isenza iRanger.
Khangela imodeli yakutshanje apha. Abaqhubi beRanger baquka i- Chevrolet Colorado , GMC Canyon , iToyota Tacoma kunye neNissan Frontier.
IiNqanaba zeeRanger zeTransm and Level Styles
I-Ranger ye-2009 yenziwe ngeendlela ezimbini zomzimba ezahlukeneyo. Iimodeli zeekhabhi eziqhelekileyo zineengcango ezimbini kwaye zikwazi ukuhlalisa abagibeli aba-3. I-Rangers ene-SuperCab ifakwe ezine iingcango kwaye iyakwazi ukuhlala 5. Iimodeli ezifakwe kwi-cab eqhelekileyo ingaba nebhedi elide eliphakathi kwe-6.1-foot okanye i-bed of 7-foot-bed, kodwa i-SuperCab imodeli iza kuphela ngebhedi le-6.1.
I-Ford midsize enamandla yayenziwe ngamanqanaba amane ahlukeneyo: XL, XLT, Sport kunye neFX4 Off-Road. Iimpawu ze-XL zizinto "eziqinileyo zoshishino", eziza nezixhobo ezifana ne-40/60-split folding bench sitesi, i-vinyl flooring, i-2-isithethi se-AM / FM, ii-wipers eziguquguqukayo ezikhoyo, ulawulo lwamandla kunye newashi. Ukuthinta okusebenzayo kubandakanya i-trailer ye-trailer kunye ne-wiring, i-cargo tie-downs, ii-wheels zensimbi ze-intshi ezili-15 kunye neenkqubo zokubeka ingcinezelo yombane.
Inqanaba elilandelayo lokulinganisa, i-XLT, longeza into edalwa yintlanzi njengempahla yendawo yokulala, indawo yokucima umoya, iipati, iipilisi ezingenanto kunye nezivakalisi ezi-2 ezongezelelweyo zenkqubo yesandi. Ingaphandle ye-XLT iphathwa kwimibala yombala phambi nangemva kwee-bumpers kunye ne-grill ye-H-bar grill iyimilinganiselo kwiiLori ezine-4x2 ze-XLT.
Imizekelo yezemidlalo ihamba ngokugqithisa ngokukhethekileyo ngaphakathi nangaphandle, kunye nezibane zombane kunye nebala elimnyama elinemibala yombala. Ngaphakathi, umsakazo we-satellite uyongezwa kwinkqubo yesandi, kunye ne-port input input. Iimodeli zezemidlalo nazo ziphathwe kumavili angama-intshi ama-intshi ama-intshi, kunye neModeli yezemidlalo e-SuperCab ifakwe kunye nemigangatho yokunyathela imilinganiselo kunye namacwecwe e-skid. I-Electronic Brakeforce Distribution (EBD) yinto ebalulekileyo yokukhusela egcinelwe imizekelo yezemidlalo, ukuqinisekisa ukuhamba okufutshane okufutshane kunye nokunyanzeliswa koxinzelelo lwe-freake kwiivili ezine.
Okokugqibela, imizekelo ye-FX4 idibanisa i-dose ephawulekayo yeendlela ezingekho komgwaqo kwifom ye-Ranger, ukugcina izikhwama kunye neebhodi xa zidibanisa ukutshitshiswa kweendlela ezingekho komgwaqo, amasondo omhlaba wonke kunye namavili angama-intshi angama-16. Izidalwa eziduduzayo ziyakwandisa ukuba zibandakanye iifestile zamandla / izitshixo kunye nezibuko, izihlalo eziphambili zezemidlalo-ezitshintshileyo, i-lumbar eguqulwayo kwisihlalo somqhubi, ukulawula iinqwelo kunye nevili elijikelezayo lesikhumba. I-FX4 trim itholakala kuphela kwiRangers e-SuperCrew-equipped.
I-Ford ye-middlesize pickup ye-2009 yayisetyenziswa ngeenjini ezimbini ezahlukeneyo. Ukuthobeka kwezona zibini ziyi-2.3-litre I4 eveza 143 hp kunye ne-154 lb.-ft.
ye torque. Ngelixa izibalo zamandla ezi-2.3-zitha zithobekile, iRangers enesinjini iyaqhubeka ihamba ngokubaluleka kwamanani oqoqosho lwehlabathi eliphambili, elijongene nenzame yokujonga i-midsize ukuya kwi-2015 Toyota Tacoma kunye ne-Nissan Frontier. I-I4 ifikeleleke kumgangatho ngamnye kwiRanger kunye ne-2-wheel drive ye-SuperCab.
Ii-Rangers ezine-wheel drive kunye ne-SuperCab zikhuthazwa yi-4.0-litre V-6 eneemandla kakhulu ezivelisa i-207 hp ne-238 lb.-ft. ye torque. Uqoqosho lwe-Fuel kwi-injini ye-4.0-litre, efumaneka kuphela nge-wheel-drive engama-4, eyi-15 mpg kwizitrato zedolophu kunye ne-19 mpg kwindlela ehamba phambili.
Ukudluliselwa kwencwadana ye-5-speed is standard kunye neenjini zombini; i-speed-5 automatic speed is available.
Impawu zo Khu seleko
Idatha ayitholakali kwi-model ye-2009, kodwa ngokufanayo i-Ford Ford Ranger yafumana amanqaku ama-5 kwinqanaba elinesibini kwiimpembelelo zokujonga umqhubi kunye neenkwenkwezi ezi-4 kwi-5 ngenxa yempembelelo yangaphambili kumgibeli kwi-NHTSA yokuvavanya.
I-Ranger yafumana amaqhosha ama-5 kwinqanaba elingu-5 kwi-NHTSA ukuhlolwa kwempembelelo yecala lomqhubi kunye neenkwenkwezi ezi-3 kwi-5 kwiimvavanyo zabo zokuhlaziya.
Impawu zokukhusela eziqhelekileyo ze-Ford Ford Ranger ziquka i-wheel-lock-lock system (nge-disc disc / i-drum), iTrans Pressure Monitoring System kunye ne-airbags zangaphambili zomqhubi kunye nomgibeli wangaphambili. Iimidlalo kunye ne-FX4 trims zongeza i-Electronic Brakeforce Distribution kwi-steaster of equipment.
Ulungelelaniso lweeRanger Towing
I-2009 Ford Ranger yokukhupha amandla iphuma kwii-1,580 iipilisi ze-2.3L (4.20) kunye nokuhamba kwee-6,000 kwiimodeli ze-4.0L (3.55) ezixhotyiswe ngokuzenzekelayo. I- Class III iTrailer Hitch kunye ne-trailer wiring iyimfuneko kuzo zonke iilori.
Ehlelwe nguJonathan Gromer
Iimoto ezipholileyo ezinobomi: Yenza i-Safezone yakho kwi-Apocalypse
2006 I-Dodge Ram 3500 iTurbo Diesel Pickup Review Review
Izixhobo zePokota zeToyota ze-2012 zeToyota
I-Ford F-Series Trucks, ngo-1967-1972
11 Izilwanyana zasemakhaya ezivela e-Asia
IMigomo yokuHamba kweeMidlalo yeOlimpiki
Iingqungquthela ezimbini zeeNcwadi zabantwana, iincwadi eziPhambili zeeNcwadi zeeNcwadi
Iinqununu zeeNkcubeko: Izilwanyana ezineempembelelo ezibalulekileyo
IYunivesithi yaseTexas kwiAltlington Admissions